Firy ny karazana akanjo tsy mahazatra?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-28
Ny akanjo fialam-boly amin'ny ankapobeny dia azo zaraina ho fialam-boly avant-garde, fialam-boly fanatanjahan-tena, fialamboly am-pitiavana, fialamboly amin'ny asa aman-draharaha ary fialamboly any ambanivohitra. 1. Akanjo mahazatra Avant garde: akanjo an-davan'andro Avant-garde, fantatra amin'ny anarana hoe akanjo fitondra lamaody, no be mpampiasa ...
Misy karazan-damba maro ho an'ny akanjo ivelany. Iza amin'ireo no mety indrindra aminao? Amin'ny fisafidianana lamba ivelany dia misy enina asa tena ilaina. Andeha hojerentsika ny enina endri-javatra: permeability rivotra Ny haavon'ny rivotra isaky ...
Ny rafitry ny kalitaontsika
Nandresy tamin'ny kalitao sy ny kalitao izahay ary nahazo ny fankatoavana ny indostria. Ao amin'ny orinasa fanondranana dia mila mifehy tsara ny kalitao isika. Manantena ny hitondra vokatra avo lenta ho an'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao. Fanaraha-maso kalitao / fanohanana ara-teknika ...
Safidio ny fanangonana Fall 2020 anao
Tonga sahady ny fahalavoana, tokony mikasa ny akanjo ivelany fianjerana ianao. Misy isan-karazany tokony hoheverinao: ny sosona fototra, ny mitsambikina, ny palitao orana, ny rivotra, ny palitao volon'ondry sns.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-08
Fomba fanaovana OEM / ODM fahaiza-manao: Afaka mamokatra ny akanjo miavaka arakaraka ny endrikao / santionany na sary na hevitra avy aminao izahay. Ny maodely mpanamboatra maodely za-draharaha dia hanome vahaolana ho anao. Ny mpiasa mahay sy ny ekipan'ny QC wi ...
Fanohanana QC / Teknika: Ny ekipanay QC dia manao fanaraha-maso henjana sy fanaraha-maso avy amin'ny akora mankany amin'ny vokatra marobe. - Ny lamba dia didiana arakaraka ny filan'ny mpanjifa, toy ny lanjan-damba, ny firafitra, ny kaody miloko, ny halavan'ny loko sns. Ny index rehetra dia mifanaraka amin'ny ...
Mombamomba ny varotra Izahay dia mifantoka amin'ny famatsiana serivisy feno sy vokatra avo lenta. Miorina amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny filan'ny tsena izahay. Ny kolontsainay dia mifantoka amin'ny: kalitao, serivisy ary fahamarinana. Tsy vitan'ny hoe mivarotra ny vokatray izahay ...